Miyaad la dhibaatooneysay cudur muddo waqtiga ah? Ma u qaadataa daawada si joogto ah? Miyaa mar hore aad ku jirtay daaweynta wadankaaga asalka ama adiga oo qaxayo?
Aad Medic-Help oo u sharax dhibaatooyinkaaga.
Cudurada qaarkood way faafaan. Taasi waxay la micna tahay, cudurka wuxuu isgaa gudbaa qof ku qof. Tani waxay ku dhici karyaa dhinaca hawada, dhinaca gacmaha wasaqda, dhiiga, mataga, qashinka, inta lagu jiro galmada, ama dhinaca taabashada tooska ah.
Ku soo wargeli Medic-Help haddii aad qabtid cabasho. Tani waxay illaalisaa adiga iyo dadka kuu dhow.
Cudurada galmada laga qaado
Inta lagu jiro cudurka galmada sida jabtada, fayruska, waraabowga ama bakteeriyaha wuu gudbi karaa. Cawaaqiibta midaan waxay noqon kartaa dhacaan, cuncun iyo barar, boogag ama xanuunka xubinta taranka. Laakin sidoo kale waad qaadi kartaa adiga oo aan cabsho laheyn.
Ka illaali nafsadaada cudurada galmada laga qaado: Marwalba isticmaal kondhom inta lagu jiro galmada. Waxaad ka heli kartaa xarunta ama aad ka iibsan kartaa farmashiyada, dukaamada daawada iyo dukaamada inta badan.
Haddii aad qabtid wax aastaamo ah ee cudurka galmada laga qaado, aad Medic-Help.
Haddii aadan hubin wax ku saabsan qabitaanka cudurka galmada laga qaado kadib galmada aan laheyn kondhom, la tasho Medic-Help. Ha sugin cabasho inay soo baxdo.
HIV waa fayrus liidiyaa difaaca jirka. Waxaad qaadi kartaa fayruska adiga oo aan aastaamo laheyn. Laakin haddii aad qaadatid wax daawooyin ah, waxay liidin kartaa jirkaaga si markaas aad u xanuunsatid. Mid ayaa kadib ka hadlaa AIDS.
Cudurka wuxuu ka gudbaa dhiiga, galmada aan laheyn kondhomka, saliingooyinka wasaqeysan ee la isticmaalay ama sida tooska ah hooyada ee canuga aan dhalan. Haddii aad sisid fayruska, waxaad qaadsiin kartaa dadka kale, xittaa haddii aadan aastaamo laheyn.
HIV/Aids lama daaweyn karo. Si kastaba, daawooyinka waxay ku caawiyaan xakameynta fayruska iyo yareynta cawaaqiibta.
Ka illaali nafsadaada HIV/Aids: Marwalba isticmaal kondhom inta lagu jiro galmada. Waxaad ka heli kartaa xarunta ama aad ka iibsan kartaa farmashiyada, dukaamada daawada iyo dukaamada inta badan.
Marwalba isticmaal saliingo nadiif ah, oo aan la isticmaalin, inta lagu jiro isticmaalka daroogada xididka si aad uga hortagtid caabuqa.
Haddii aadan hubin kadib sameynta galmada oo aan kondhom laheyn, haddii aad qabtid HIV/AIDS ama cudur kaloo galmada laga qaado, la xiriir Medic-Help. Ha sugin cabasho inay soo baxdo.
Dadka tiibishada qabo waxay qufacaan ugu yaraan sadex isbuuc, qabo qandho, dhididka habeenkii ama miisaan liminta. Tiibishada waa lagudbin karaa markii dad caafimaadan neefsadaan qufaca hawada bukaanada.
Tiibishida waa halis. Laakin haddii cudurka xili hore la ogaado, waa la daaweyn karaa. Daaweynta waxay raagtaa ugu yaraan lix bilood.
Haddii aad leedahay wax aastaamo ah oo tiibishada, lagaa daaweeyay tiibisho, ama aad taabatayqof xanuunsan, aad Medic-Help.
La qabsiga iyo Daroogada
Qamriga, daroogada ama maandooriyaha kale waxay noqon karaan kuwa la qabsi leh oo waxyeelo ku ah caafimaadkaaga. Ha isticmaalin daawooyinka.
Isticmaalka daroogada xididka, cudurada waxay ku kala gudbi karaan dhinaca dhiiga, tusaale ahaan, haddii aad isticmaashid saliingooyin.
Haddii aadan sameyn karin daroogo la'aanta, marwalba isticmaal saliingooyin nadiif ah, aan la isticmaalin marka ma qaadeysid.
La qabsiga waa la daaweyn karaa oo hoos u dhici karaa. Ku soo wargeli Medic Help.
Waaya aragnimada adag ama rabshada - sida dagaalka, baxsiga, jirdilka ama kufsiga - wuxuu ku sababi karaa jirka ama maskaxda ay xanuunsadaan. Sidoo kale, cabitaanka culus ama dhibaatooyinka la qabsiga kale waxay la xiriiri kartaa.
Bukaano badan waxay u arkaan dhibaato inay ka ahdlaan jirada maskaxda. Waa muhiim inaad si dhab ah u qaadatid oo ula dhaqantid sida cudurada kale.
Aastaamaha jirada maskaxda waxaa ku jiro jiifka liito, la kulmida qarowga, xanuun aan la sharaxin, ama raaxo la'aan kale oo muddo dheer oo waqti ah.
Dhibaatada maskaxda waa la daaweyn karaa. La xiriir Medic-Help.
Busbuska waa cudur aad u faafo. Aastaamaha caadiga ah waa qandho iyo nabro oo horay loogu nadiifiyay finanka biyaha cad. Waxaad uga illaalin kartaa nafsadaada busbuska tallaal.
Haddii adiga iyo canugaaga leeyahay aastaamaha busbuska, aad Medic-Help.
Haddii aadan laheyn busbus, is tallaal. Aad Medic Help oo midaas.
Dadka qabo jadeecada caadi ahaan la xanuunsado qandhada, indhaha gaduudan, qufaca iyo nabraha oo leh baraha gaduudan. Waxaad uga illaalin kartaa nafsadaada jadeecada tallaal.
Haddii adiga iyo canugaaga leeyahay aastaamaha jadeecada, aad Medic-Help.
Haddii uusan kugu dhicin jadeeco, is tallaal. Aad Medic Help oo midaas.
Gowracatada waa cudur mareenka neefta kore ama maqaarka. Waxaa jiro labo nooc: gowracatada dhuunta iyo gowracatada maqaarka.
Haddii ay jirto gowracatada dhuunta, bukaanada waxay la xanuunsanayaan dhuun xanuun, qandho iyo xanuun marka wax liqaayo. Bakteeriyaha maqaarka, si liito u bogsanayo xanuunaha waa aastaamaha ugu muhiimsan. Waxaad uga illaalin kartaa nafsadaada gowracatada tallaal.
Haddii adiga iyo canugaaga leeyahay aastaamaha gowracatada, aad Medic-Help.
Haddii uusan kugu dhicin gowracatada, is tallaal. Aad Medic Help oo midaas.
Cudurka maqaarka faafa waa cudur faafa ee maqaarka. Waxaa kiciyaa cayayaan qodaa maqaarka.
Jirka ayaa ka falceliya cuncunka daran, Finanka iyo nabraha, caadi ahaan aaga xubinta taranka, inta u dhaxeyso faraah, xubnaha gacmaha iyo xubnaha kale, ka hooseyso kilkisha iyo ibta naaska.
Cudurka waxaa la isugu gudbiyaa inta u dhaxeyso labo qof oo taabashada maqaarka oo toos ah.
Caabuqa caloosha ama mandhaciirka waxaa inta badan wehliyo matag iyo shuban, si wada jir ah qandho la jiro iyo calool xanuun. Bukaanada inta badan waxay lumiyaan dhacaan badan oo muddo gaaban waqti ah.
Haddii adiga iyo canugaaga leeyahay aastaamaha caloosha, aad Medic-Help.
Waxaa jiro cuduro kale oo badan. Halkaan waxaa ka heleysaa warbixin gaar ahaan ku saabsan cudurka inta badan faafa.
Aad Medic-Help, xittaa markii cabashooyinkaaga aysan ku habooneyn cudurada halkaan lagu sheegay.